प्रि–मनसुन कहिले सम्म ? - ParyatanBazar.com
प्रि–मनसुन कहिले सम्म ?
नेपालमा सोमबारबाट प्रि–मनसुन सुरु भएको छ । मौसमविद्का अनुसार आगामी १८ जेठसम्म रहने यो याममा हावाहुरी चल्नुका साथै मेघ गर्जन, चट्याङसहित असिनापानी पर्नेछ । नेपालमा सामान्यतः १० जुनबाट मनसुन सुरु हुन्छ । जाडोयामपछि र मनसुनअघिको अवधिलाई प्रि–मनसुन भनिन्छ ।
विशेषगरी तराईमा फुसका घरसमेत हुने भएकाले यो याममा हावाहुरीले घरका छाना उडाउने समस्या हुन्छ । १७ चैत ०७५ मा बारा र पर्सामा आएको चक्रवातले दुई हजार ६ सय ३७ घरमा क्षति पुर्‍याएको थियो भने २८ जनाको ज्यान गएको थियो ।
विश्व मौसम संगठनले यो वर्ष प्रि–मनसुन अवधिमा कम पानी पर्ने र तापक्रम पनि औसतभन्दा बढी रहने आकलन यसअघि नै गरिसकेको छ । विश्व मौसम संगठनले नेपालसहित १२ वटा मुख्य केन्द्रको आगामी तीन महिनाको वर्षा र तापमान आकलन गर्दा यस अवधिमा औसत तापमान सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ६०–८० प्रतिशत छ । यसैगरी, यो अवधिमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ४०–६० प्रतिशत मात्र छ । यद्यपि, सुदूरपश्चिम प्रदेशको उत्तरी क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना देखिएको जनाएको छ ।
गत वर्ष फेबु्रअरी–अप्रिल (१९ माघदेखि १७ वैशाख)मा औसत १८७ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो । जसमा सबैभन्दा बढी ताप्लेजुङमा २३५ मिलिमिटर पानी परेकामा सबैभन्दा कम नेपालगन्जमा ५७ मिलिमिटर औसत वर्षा भएको थियो । गत वर्ष यी तीन महिनाको औसत तापक्रम २३.१ डिग्री सेल्सियस रहेकामा यो वर्ष बढ्ने आकलन गरिएको हो ।
यस वर्ष हिउँदयाममा निकै कम वर्षा भएको छ । यो अवधिमा कुल वार्षिक वर्षाको ६०.९ प्रतिशत पानी पर्नुपर्ने भए पनि औसत १५.४ मिलिमिटर मात्र वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांक छ । गत हिउँदमा १५०.३ मिलिमिटिर वर्षा भएको थियो ।